December 24, 2018 – Kichuu
Hidhaa fi ajjeechaan ummata Oromoo irraa haa dhaabbatu! (Ibsa: Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Mudde 24,2018) Hidhaa fi Ajjeechaan ummata Oromoo irraa dhaabbatuu qaba! (qeerroo)—Waggaa 27 sirni EPRDF dhaabbilee afur hogganu, jalatti ilmaan Oromoo jimlaan ajjeefamaa, miliyoonaan lafarraa [Read More]
Must Listen the anti-Oromo and Oromia TV ESAT Eletawi Mon 24 Dec 2018 #Ethiopia: #Oromia region said 56 individuals suspected of corruption are detained following investigations by the region’s anti-corruption commission. It said more arrests [Read More]
Ethiopia’s PG7 considers name change, joins forces with 3 parties (africanews)-Ethiopia’s opposition party, Patriotic Ginbot 7 (PG7) has become the latest to collaborate with other parties, as politicians and their organisations position themselves for the [Read More]
OMN: Haala yeroo irratti marii Prof. Izqeel Gabbisaa, Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Jawaar Mahammad faana taasifame. Haasawa Mi’aawaa Onnee nama fudhatu PNO Oromiyaa Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaatiin!! Har’a ille Iji Oromoo banamuu hin..dandeenye…… Adeemsi [Read More]
ABO- Waajjira ABO, Oromiyaa, Ada’aa Bargaa-Muddee 16-2011 ifattii galmi saaqamuf jira qophinis rawwaatera I beg for respect for our Jabana! It is not an armament to be in the war field or commando show or [Read More]
Oduu…Waajjirri ABO Godina Wallagga Dhihaa Magaalaa Gimbiitti Muddee
Oduu…Waajjirri ABO Godina Wallagga Dhihaa Magaalaa Gimbiitti Muddee 23/2018 sirna ho’aan baname.
Guyyaa har’aa Qeerroon Geetaachoo jedhamu Gimbii keessatti rukutamee wareegame
[SQ, Mudde 24,2018] Guyyaa har’aa Qeerroon Geetaachoo jedhamu Gimbii keessatti rukutamee wareegame #Oduu_Gaddaa “Magaalaa Gimbiitti waraanni RIB mootummaan bobbaasee jiru guyyaa har’a nama maqaan isaa Geetachoo jedhamu kan sammuun dhukkubu karaa irratti rasaasaan dhooftee ajjeefte [Read More]
እነሱ በገበሬ ሙድ እንዲህ እየታጠቁ አንተን ትጥቅ ፍታ ሁለት መንግስት የለም ሲሉህ
እነሱ በገበሬ ሙድ እንዲህ እየታጠቁ አንተን ትጥቅ ፍታ ሁለት መንግስት የለም ሲሉህ አዎ #ሸኔ ምንቅርጥሶ እያልክ ጭራህን የምትቆላ የኦሮሞ ልጅ ንቃ ጅሎች ብልጥ ሆነዉ አንተ ጅል ስትሆን “በፊየል ዘመን በግ ሆነሃል” ማለት ነዉ። Fekadu L. Bayisa Where [Read More]
Mee nama tokko wajjiin waliin isin barsiisuu?Alamu Simee Eenyu ? Icciti Alemu Sime fi ODP(OPDO)
Mee nama tokko wajjiin waliin isin barsiisuu? By Dulaa Dhugassaa Abdiisaa Alamu Simee Eenyu ? Icciti Alemu Sime fi ODP(OPDO Alemu Simee Itti Gafatamaan waajjira dhaaba odp, “abon dubarti oromoo dirqisise gudeeda, uummata saama, Bank Saama, [Read More]